Gudiga Horumarinta Gobolka Raascasayr oo lagu so dhoweeyay Dagmada Xaabbo | raascasayrmedia.com
← Midowga Afrika iyo AMSIOM oo kulan looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ku qabanaya dalka Gaana
Dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo ka hadashay dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ku haysta dalka Liibiya →
February 26, 2011 · 7:24 pm
Gudiga Horumarinta Gobolka Raascasayr oo lagu so dhoweeyay Dagmada Xaabbo
Waftiga Horumarinta Gobolka Raascasayr oo si heersare ah loogu soo dhoweeyay Dagmada Xaabo . Waftiga ayaa waxaa si heersare ah u soo dhoweeyay dadwaynaha ku dhaqan Magaalo warshadeeda Xaabbo waxayna dadku gacmaha ku hayeen caleemo qoyan iyaga oo ku dhawaaqaayay soo dhowaada mudanayaal .
Waraysi uu la yeeshay Allcaseyr.net mid ka mid ah waftiga qurba joogta ee ka tagay cariga England ayaa waxaa uu noo sheegay in si heer sare ah loogu soo dhoweeyay dhamaan deegaanada Gobolka Raascasayr .
Mar aan wax ka waydiinay ujeedada safarkooda ayuu yiri ; Waxaan u nimi sidi aan uga shaqayn lahayn horumarinta Gobolka gaar ahaan kor u qaadida adeegyada bulshada sida hirgalinta Jaamacado , Xarumo waawayn oo daawayn ,sidoo kale waxaan shirar la yeelanaynaa qaybaha kala duwan ee dagmooyinka Gobolka ;
Isku soo wada duuboo waftigaan ayaa ku maraaya safaro dhamaan dagmooyinka iyo Tuulooyinka Gobolka Raascasayr
Nadiifo Cismaan siciid